15KW Yakakwira mashandiro ekuchaja module Vagadziri, Vatengesi - China 15KW Yakanyanya kushanda yekuchaja module Fekitori
IP65 Yakakwirira Inodzivirira chargi ...
15KW akateedzanaEV kuchaja rectifieris yakanyatsogadzirirwa iyo EV DC super charger. Iyo ine yakakwira simba chinhu, yakanyanya kushanda, yakakwira simba kuomarara, kuvimbika kwakanyanya, kungwara kutonga uye wakanaka chitarisiko mukana. Hot pluggable uye akangwara edhijitari ekudzora matekinoroji anoshanda pamwechete kufanofungidzira kudzivirira kukundikana uye kuve nechokwadi chakanyanya kuvimbika.
UR75020-W yekuchaja module yakanyatsogadzirirwa iyo EV DC super charger. Iyo inodada nezvakanaka zveyakakura simba chinhu kururamisa, kushanda kwakanyanya, kwakasimba kwesimba, kuvimbika kwakanyanya, kutonga kwakangwara, kutaridzika kwakanaka uye kudiki kwekugara. Yakakwirira kuvimbika dhizaini dhizaini uye nehungwaru dhijitari ekudzora matekiniki anoshanda pamwechete kufanofungidzira kudzivirira kukundikana uye kuve nechokwadi chakanyanya kuvimbika.